” ငယ်ပါသေးတယ် ကလေးရယ် “ – Grab Love Story
ပူပြင်းလှသော နွေနေ့လေးတစ်နေ့ ။
စရမှာပေါ့ ။ အိမ်ထဲကိုဝင်ဝင်ချင်းပဲ
” ဟာ သားကြီးမင်းလာတာနဲ့အတော်ပဲ ငါဒီနေ့ဆော်
ငါ့အမေလဲ သူ့ ညီမငါ့အဒေါ်ခေါ်သွားလို့
” ဒါများကွာ အိမ်တံခါးပိတ်ပြီးသွားပေါ့ကွမင်းကလဲ “
” အေး ငါ့ညီမဝမ်းကွဲလေးပါလာလို့ပေါ့ကွ ငါ့အဒေါ်က
တယောက်ကို သတိထားပြီးကြည့်မိလိုက်တယ် ။ အငုံ
ဘဝကနေ ပွင့်ချပ်တွေလန်ဖို့ တဖြေးဖြေးချင်းပွင့်နေတဲ့
ကလေး ။ ရာသီစလာဖို့သိပ်မလိုတော့တဲ့အရွယ်ပေါ့ ။
ပူအိုက်လွန်းတဲ့နေကြောင့် စွတ်ကျယ်လိုအကျီ င်္လက်
ပြတ်ပါးပါးလေးအောက်မှာ သူ့ရဲ့နို့အစုံက လက်
” ငါဒိုးတော့မယ်သားကြီး နောက်တောင်ကျနေပြီ
” အေးပေါ့ကွာ အနိင်ကျင့်ပေါ့ကွာ ငါလဲဝဋ်ရှိသရွေ့
တချက်ခတ်ဖွဖွထိုးပြီး အိမ်ထဲကနေထွက်သွားတယ် ။
ကိုယူပြီးဖတ်နေလိုက်တယ် ။ ဒါပေမဲ့ခဏပါပဲ ။
ရောက်သွားတယ် ။ ပေါင်လေးကိုဟလိုက် စီလိုက်နဲ့
ကို လာပါလို့လက်ယက်ခေါ်နေသလိုပဲ ။ တချက်
ထားတဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီ ပန်းရောင်လေး ။
အဲဒီလိုနဲ့မကြာပါဘူး ဖုန်းဂိမ်းဆော့နေတဲ့ကောင်မလေးက ကျွန်တော့်ကိုအခုမှသတိထားမိသလိုမျိုးပုံစံနဲ့ ခေါင်း
” ဟိုအကိုကြီးမပျင်းဘူးလား သမီးလိုဂိမ်းဆော့ပါလား”
” အေးမဆော့တော့ပါဘူးကွာ နေအရမ်းပူတော့
နေရထိုင်ရတာ မသက်သာဘူး ရေအေးအေးလေး
” ဒါများအကိုကလဲ ရေအေးအေးမှမဟုတ်ပါဘူး မီးဖိုဆောင်ထဲကရေခဲသေတ္တာထဲမှာ
လိမ္မော်ရည်ပုလင်းရှိတယ် အဲမှာသွားသောက် သမီး
ထဲက လိမ္မော်ရည်ပုလင်းယူပြီး ဖန်ခွက်နဲ့တခွက်ငဲ့
သောက်လိုက်တယ် ။ ပြီးမှ ကောင်မလေးအတွက်
တဲ့ဆေးခြင်းလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ် ။ အဲဒီအထဲက
သောက်မဲ့အအေးထဲမှာ ထည့်လိုက်တာပေါ့ ။
သိတယ်မို့လား ကျွန်တော်ရဲ့ဂွင်ထဲရောက်ဖို့ ကောင်မ
” ရော့ အကိုကတော့သောက်ပြီးပြီ “
ကျွန်တော်ပေးတဲ့အအေးခွက်ကို တခါထဲမော့သောက်ပြီး ဂိမ်းဆက်ဆော့နေတဲ့ ကောင်မ
လေးကို အကဲခတ်ရင်း စာအုပ်တအုပ်ကိုလှန်ကြည့်
နေလိုက်တယ် ။ မကြာပါဘူး ဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်နေရင်း
” အိပ်ချင်လိုက်တာ ဘာလို့လဲမသိဘူး “
ဆိုပြီး ဆိုဖာပေါ်မှာလှဲနေရင်းကနေ ဖုန်းလေးရင်ဘတ်
အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်လဲ သူ့ပေါင်လေးကို မရဲတရဲနဲ့ထိပြီး ခတ်ဖွဖွပုတ်နိူးကြည့်လိုက်တယ် ။
သေချာတာကတော့ သူလုံးဝအိပ်ပျော်သွားပြီ ။
ပေါ်တင်လိုက်ရင်း အသက်ရှုသံနဲ့အတူ မို့မောက်နေတဲ့
နို့စူစူလေးတွေကို အငမ်းမရကြည့်နေမိတယ် ။
လိုက်တာပေါ့ ။ အိအိစက်စက်နဲ့ လက်ထဲမှာလိုသလို
ဘူး ။ အအိပ်မက်တဲ့ကောင်မလေးထင်ရဲ့ ။ နို့အုံနားက
ခတ်ပါးပါးအကျီ င်္စလေးကို လည်ပင်းအနားကနေ
အောက်ကို ဆွဲကြည့်လိုက်တော့ ရှင်မီးအကျီ င်္မဟုတ်ပဲ
နုညံ့တဲ့သာမန် ဘော်လီလေးတထည်ကို ဝတ်ထား
တယ် ။ အဲဒါနဲ့ ဘော်လီအတွင်းထဲကို လက်ညိူးနဲ့
အသာထိုးပြီး ဆွဲကြည့်လိုက်တော့ ။ နီရဲနေတဲ့နို့သီး
ခေါင်းနဲ့အတူ ရေနွေးပုကန်ထက်ပိုပြီးကြီးတဲ့ သူ့ရဲ့ဖြူ
ဖြူဖွေးဖွေးနို့ကလေးကို တွေ့လိုက်ရတာပေါ့ ။
ဒီအဆင်ကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပဲ ကျွန်တော့်လီးက အကြောပြိုင်ပြိုင်ထအောင် တောင့်
လိုက်တာနဲ့ ထိန်းမရတဲ့နွားသိုးတကောင်လို အပြင်
ကိုဆန့်ထွက်လာတယ် ။ ပန်းနုရောင်နို့သီးခေါင်း
ငုံရင်း လီး ကိုအရှေ့အနောက်ဂွင်းထုနေမိတာပေါ့ ။
သလား ။ အဓိက က သူ့ရဲ့ကွယ်ဝှတ်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့
အဲဒါနဲ့ ခြေကလေးဆန့်ပြီးအိပ်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖတ် ဟ သွားအောင် တဖတ်ကိုဒီအတိုင်း ဆိုဖာနောက်မှီမှာ ခတ်ကွေးကွေး
လေးထောင်ထားလိုက်ပြီး ကျန်တဲ့တဖတ်ကို ဆိုဖာခုံ
ရှေ့က စားပွဲပေါ်ကိုတင်လိုက်တော့ ပေါင်အရင်းနား
ထိ ဟ သွားတယ် ။ သူ့ဘောင်းဘီကအတိုဆိုပေမဲ့
တွေ့လိုက်ရတယ် ။ သူ့စောက်ဖုတ်နေရာမှာ မို့မို့
က ဂနာမငြိမ်ပဲ အရည်ကြည်တချို့စိမ့်ထွက်လာအောင်
ကျွန်တော့်စိတ်နဲ့အလိုက်တသိရွေ့လျားနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့လက်ညိူးလေးက သူ့စောက်ဖုတ်ပေါ်ကို အက်ကွဲကြောင်းလေးပေါ်လာအောင် အထက်အောက်
ဆော့ကစားနေမိတယ် ။ ကာမစိတ်ကြောင့် လော
သူ့စောက်ဖုတ်လေးကို မြင်ရဖို့ အတွင်းခံဘောင်ဘီစလေးကို အသာ ဟ ပြီးကြည့်
အားပါးပါး အမွှေးအမျှင်နုနုလေးတွေပေါ်မှာ နွေနေ
ဝင်ဝင်စိုစိုနဲ့ ။ သူ့စောက်ပတ်နူတ်ခမ်းသားနှစ်ခြမ်းကို
နီနီရဲရဲနဲ့ ။ပုလဲတလုံးကိုငုံထားတဲ့ မှုတ်ကောင်လို
နှုတ်ခမ်းကြားမှာ တွေ့လိုက်ရတယ် ။
လူတကိုယ်လုံးနတ်ဝင်ပူးသလို ကျွန်တော်တုန်ရီနေပြီး မထိန်နိင်တဲ့စိတ်အာယုံကြောင့် ဘယ်အရာမှစဉ်းစား
မနေတော့ပဲ သူခြေထောက်ကိုပြန်စုပြီး သူဝတ်ထားတဲ့
ဘောက်ဘီတိုနဲ့ သူ့အတွင်းခံကို ချွတ်ချလိုက်တယ် ။
သူကတော့ ကမ္ဘာပျက်ရင်တောင်မနိူးမဲ့ပုံစံမျိုး ။
သူ့စောက်ဖုတ်နူတ်ခမ်းသားလေးက ဟ လာတယ် ။
မြင်တော့ ကျွန်တော်မနေနိင်တော့ ။ သူ့ပေါင်းကြား
စောက်ဖုတ်အပ်ကွဲကြောင်းလေးထဲကို လျှာနဲ့ထိုးထည့်လိုက်ပြီး ရက်ကြည့်လိုက်တော့ အတွင်းထဲက စိမ့်ထွက်လာတဲ့ ရှိသမျှအရည်တွေကို စုတ်ယူမျိုချပစ်လိုက်တယ် ။ ဒါနဲ့အားမရသေး
ကြည့်လိုက်တော့ သူဆီက ‘ အင့် ‘နဲ့အသံထွက်လာ
တာကြောင့် ဆက်မထိုးရဲတော့ပဲ ဒီအတိုင်းစောက်
ဖုတ်တပြင်လုံးကို အကုန်သိမ်ကျုံးယက်ရင်း လီးကိုလဲ
လက်နဲ့အဆက်မပြတ်ထုနေမိတာပေါ့ ။ ဒီအရသာ
ကို ဘာနဲ့မှမလဲနိင်ပါဘူး ။ စောက်ချီးနံ့လေးသင်း
နေတဲ့စောက်ဖုတ်ကို စိတ်တိုင်းကျယက်ရင်း ထွက်လာ
သမျှအရည်ကိုမျိုချရတဲ့ အရသာကို ဘယ်လိုအရာ
မျိုးနဲ့မှလဲနိင်မယ်မထင်ပါဘူး ။ တချို့က စောက်ချီး
ဆီ ကြိတ်ဆုံထဲက ထွက်လာတဲ့ နှမ်းဖတ်ခဲလို လမ်းလျှောက်တိုင်း စောက်ပတ်နူတ်ခမ်းသားကြားက ချွေးနဲ့အတူ ကြိတ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ ဖြူညစ်ညစ် အဆိုင်အခဲအဖတ်လေးတွေ
က တကယ်တော့မွှေးပါတယ် ။ စောက်ခေါင်းဝအတွင်း
ထဲကထွက်လာတဲ့ ရာသီသွေးနဲ့ အဖြူဆင်းတာတွေက
သာနံတာပါ ။ မယုံရင် မိန်းမတယောက် ရာသီသွေး
နဲ့ အဖြူ မဆင်းချိန် ဒီအတိုင်းဝတ်ပြီးသား အတွင်းခံဘောင်ဘီရဲ့စောက်ဖုတ်နေရာကိုနမ်းကြည့်ပါ
နမ်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်ထဲ လီး ကထောင်မတ်လာပါ
အဲလောက်ထိ အဲဒီအနံ့က ယောကျာ်းတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုနိူးစွနိင်ပါတယ် ။ ဘောင်းဘီက စောက်ချီးအနံ့နမ်းကြည့်ယုံနဲ့
အခုလိုမျိုး စောက်ဖုတ်တပြင်လုံး စောက်ချီးအနံ့ရူပြီး
စိတ်တိုင်းကျ လျက်ပြီး အောက်ကထန်နေတဲ့လီးကို
လူကသာအိပ်နေပေမဲ့ ထိတွေ့မှု့တွေကြောင့်စိမ့်ထွက်လာတဲ့ သူရဲ့စောက်ရည်ကြည်တွေကလဲ တဖြေးဖြေးများလာ
သလို ကျွန်တော့်ရဲ့လီးကလဲ ဘယ်လိုမှထိန်းလို့မရအောင် အရည်တွေကလီးထိပ်ဝ
ကိုရောက်နေလာပြီးပေါ့ ။ နောက်ဆုံး သူ့စောက်ခေါင်း
ဝထဲကနေ လျံတတ်လာတဲ့ စောက်ရည်ကြည့်တွေကို
အောင် စုတ်ယူမျိုးချလိုက်ပြီး ထိန်းထားလိုမရတော့
တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့လီးထဲက သုတ်ရည်တွေကိုလဲပန်းထုတ်
လိုက်မိတော့တယ် ။ ဒီလိုအရသာ ဒီလိုအခွင့်အရေး
ဒါကြောင့် လီးနဲ့တခါမှမထိတွေ့မဆက်ဆံဘူးသေးတဲ့ သူ့ရဲ့စောက်ဖုတ်လေးထဲကို ကျွန်တော့်လီးထဲက ပန်း
ထည့်လိုက်မိတယ် ။ ရာသီမလာသေးတာကြောင့် ဘာမှမဖြစ်နိင်ပေမဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကိုဝင်ရမဲ့
ချင်တာ ကျွန်တော့်ရဲ့အတ္တဖြစ်နေမလား ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းငယ်ပါသေးတယ်ကလေးရယ် …
တနေ့သီရိဆိုတဲ့ကောင်မလေး လှေကားပေါ်ကချော်ကျပီးကျနော်တာဝန်ကျတဲ့ဆေးရုံကိုလာတတ်ပါရော ဆရာဝန်ကြီးဒေကလဲကျနော်ကိုဘဲ ကြည့်ခိုင်းတော့တယ် အဲဒါနဲ့ကိုကျနော်ကုပေးရတာပေါ့
ကောင်မလေး က ဖတဆိုးလေး ဗျ
ရင်သားလေးကလဲတောင့်တောင့်တင်း ခါးလေးကလဲသိမ်သိမိလေး အိုးလေးကကျစ်ကျစ်လှစ်လစ်လေး
အဲ့သူကို အခြေနေသွားကျိပေးတော့ သူနဲ့ကျနော်နဲ့၂ယောက်ထဲကျန်တဲ့လူမေကလဲဒီနားဆေးသွားဝယ်တဲ့ချိန်
ကျနော်ကလဲ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ နို့တွေတင်လုံးတွေခိုးကြည့်နေရင် လီးကတောင်နေတာပေါ့
ဖစ်ချင်တော့မနက်ကကျိထားတဲ့ဇာတ်ကားအရှိန်ကလဲမပြေသေး သူကလဲမမြင်မြင်အောင်ပြနေသလိုဘဲ ရင်ဘက်လေး ဆွဲဆွဲတင်လိုက် အင်ကျီကလဲ အကျယ်ဆိုတော့ ရင်သားလေးဒေကိုဖွေးလေး မြင်နေရတာပေါ့
ကျနော် လဲ ထွက်နေတဲ့ကျနော့်လီးကိုလဲထိန်းရင်းပေါ့
ကောင်မလေးကဘယ်လိုမြင်သွားလဲမသိဘူး အဲကျမှကျနော်လဲ အောက်ငုံကျိမိတယ် ညိတော်မောင်ကတော်တော်ထနေပိကိုး ကောင်မလေးကရှက်သလိုလိုမျက်နျာလွဲသွားတယ် ပိးတော့မာ့ ခနပြန်လှည့်ကျိပိး
“ဆရာ့ လီးကအကြီးကြီးဘဲနော်”တဲ့ ဖောင်းနေတာဘဲတဲ့
ကျနော်လဲအနားဖြေးဖြေးချက်းကပ်ပြီး သူ့ရဲ့နခမ်းလေးကို စနမ်းတော့တာပေါ့ကောင်မလေးကလဲအလိုက်သင့်လေးပြန်နမ်းတယ်အထူးခန်းထဲမာဘယ်သူမျမရျိဘူး ကျနော်နဲ့သူနဲ့နယောက်ထဲရှိတယ် တွေးကျိဘယ်လောက် စိတ်ဒေထလိုက်မလဲဆိုတာ
ကျနော်သူ့ ထမီစကိုအသာလေးဖြည်ချပြီး သူအဖုတ်လေးကိုအသာလေးပွတ်ပေးနေမိပါတယ်
သူတဖြည်းဖြည်းဖီးလ် တက်လာတယ် ထင်ပါတယ်သူ့ပေါင်လေးကတဖြည်းဖြည်းကားလာပြီး မျက်လုံးလေးမှိတ်ကာ ညည်းနေလေရဲ့
“အား… ဆရာ မရတော့ဘူး သီရိကိုလိုးပေးပါတော့ဆရာရယ်”
“ပေါင်လေးကားထားပေးနော် ပေါ်လှဲလိုက်”သူ့ကိုကူတင်ပေါ်မာ ပေါင်လေးကားခိုင်းထားပိး ကျနော်သူ့အဖုတ်ကို လျှာထိုးမွှေ ပေးလိုက်တယ် ခနနေတော့အရည်တွေစီးကျလာပါနယ် ကျနော်ပါးစပ်ထဲရောက်လာတာနဲ့ကျနော် မြှိုချလိုက်ပါတယ် သူကကျနော်ကြည့်ပြီး
ကျနော်လဲသူ့ကိုပြုံးပြလိုက်ပြီး သူ့အဖုတ်လေးကို ပြန်ပြီးလျက်နေပေးလိုက်တယ်
သူက လှဲနေရကထလိုက်ပြီး ကျနော်လီးကို စုပ်ပေးဖို့ လီးကိုကိုင်ထားပါတယ်
“အားပါးပါး… ကောင်းလိုက်တာ သိရိရယ်”ဆိုပီးညိးလိုက်
သူစုပ်ပေးနေတာကို တဖြည်းဖြည်း ဖီးလ် ယူနေရင်း ပြီးချင်သလိုလို ဖြစ်လာပါတယ်
“ဆရာ သီရိကိုလုပ်ပေးပါတေါ့” လို့သူ့ပါးစပ်လေးကပြောလာယ်
“Omm omm “လို့ပြောပိး
“သမီးခုနကအတိုင်းလေးဘဲ လှဲလိုက် စောက်ပတ်လေးကိုဖြဲထားပီး ကျိတော့ နီနီရဲရဲလေးလုပ်ချင်စရာလေးဗျာ”
ကျနော်လဲ လီးတန်ကိုကိုင် ဒစ်ဖျားလေးကိုသွင်းလိုက်ပါတယ် ပြီးနောက်အနဲငယ်သွင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်”
သူ့ဆီမှ “အား”ခနဲ ညည်းသံလေးထွက်လာပါတယ်
“Omm နဲနဲပါ”ဆို အံတင်းခံတယ်
“အင်း.. ရည်းစားနဲ့ပါ လီးကလဲတိုတော့ ၁၀ချက်လောက်လုပ်ပြီး ပြီးသွားတာ ဖီးလ် တောင်မယူလိုက်ရဘူး”
အောက်ကလဲအရှိန်မပျက်လိုးရင် နို့လေးတွေကို တဖက်ချင်းစို့ပေးနေလိုက်ပါတယ်
သူ့ကို လေးဘက်ထောက်လေးကုန်းခိုင်းလိုက်ပါတယ် နောက်ကနေကြည့်လိုက်တော့ အားပါးပါး လှလိုက်တဲ့စောက်ဖုတ်လေးဗျာ သူ့ဖင်ပေါက်လေးကိုလိုးမကြံမိပါသေးတယ် အချိန်ကြာသွားလို့သူ့အမေပြန်လာလို့ မိသွားမှဖြင့်ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေဦးမယ်
စောက်ဖုတ်လေး ကိုဘဲအချက်နှစ်ဆယ်သုံးဆယ်လောက် မြန်မြန်လေးလိုးပေးလိုက်ပါတယ်
အဲ့နေကစပြီး သူ့ဆေးရုံမဆင်းခင်ချိန်ထိ နေ့တိုင်းခိုးလိုးဖြစ်ကြတယ် နောက်တော့တည်းခိုခန်းခေါ်ပီဲးလိုးဖစ်သေးတယ်…
သီရိစိတ်တွေထနေပီ…… အခါတိုင်းတော့စက်ပတ်ယားရင်ဆရာလိုးပေးနေကခုဆေးရုံကဆင်းကထဲက သီရိဆရာနဲ့လိုးတာဒေပြန်မှန်းရင်း လက်နဲ့ကလိလိုက်ရ ဒုတ်နဲ့ကလိနေရနဲ့ အရမ်းကိုလိုးတာခံချက်နေပီ
”အာ့ဆို … အဲဒီကိုလာခဲ့လိုက် ညနေ 6နာရီကိုရုံးဆင်းတာနဲ့တန်းလာခဲ့မယ်စောင့်နေနော်”
”ommစောင့်နေမယ်နော် ဆရာ ”
”bye သီရိ” ကျမလေ ဆရာနဲ့ လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ အရမ်းဆာနေပီ…
အောက်ကညီမလေးကို စမ်းကျိတော့ အရမ်းခံချင်နေတာနဲ့ အိပ်ယာပေါ်မာ ကွကိုလက်နဲ့လုပ်နေရတယ် ဒါမဲ့အရမ်းထည့်ချင်လာတာနဲ့ မီးဖိုချောင်မာပစ္စည်းသွားရှာရတော့တာဘဲ
ခရမ်းသီးကြီးမြင်လိုက်တာနဲ့ကျမမခံစားနိုင်တော့ဘူး အခန်းထဲအမြန်ယူသွားပီး ကျမစပထဲကို ပွတ်ပေးနေမိတယ် အရည်ဒေကလဲစိမ့်ထွက်လာပီ ခရမ်းသီးကိုအပေါက်ဝကိုနဲနဲချင်းဆီထည့်မိတယ် ”အားး…လီးအစစ်လိုနွေးမနေပေမဲ့ စပတခုလုံးကျက်သိမ်းထသွားပါရော အားး … အားး … ဆရာရယ်မြန်မြန်လုပ်ပါဆိုပီးဘကျမ တချီပီးသွားတော့
ညနေဟိုတယ်ရောက်တော့ မကြာပါဘူးဆရာလဲရောက်လာတယ် အခန်းဝမာတွေ့တွေ့ချင်း ကျမနူတ်ခမ်းဒေကိုအငမ်းမရနမ်းတော့တာဘဲ ကျမလဲဆာနေပီဆိုတော့ဆရာဘောင်းဘီထဲလက်နိုက်ပီး ဆရာလီးကြီးကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပေးနေတယ် ”သီရိရယ် လွမ်းလိုက်တာကွာ ကျမလဲဆရာကိုအလွမ်းနေတာ”ကျမဒူးထောက်ပီးဆရာလီးကို ပျာ်ပျယ်နယ်နယ်စုပ်ပေးတယ်
”အားး …ကောင်းလိုက်ထှာ…သီရိရယ်”ဆိုပီးဆရာဆီကအသံလေးဒေကကျမကိုပိုပီး စုပ်ပေးချင်မိနေတယ်
”သီရိ ကိုတို့လုပ်ရအောင်နော်”ဆရာပြောတာနဲ့ကျမလဲကုတင်ပေါ်တတ်ပီး ပေါင်လေးကားပေးထားလိုက်တယ်
လီးကြီးဝင်လာမှာကိုမျှော်နေပါတယ်. ဖျစ်…..ဖျစ်……. အားးးးး..အားးးး
ဆရာက နွားသိုးကြီးတကောင်လို အသကုန်စောင့်ထိုးချလိုက်တော့. ကျမအရမ်းနာသွားတယ်
အားးးးအားးးးး ဖြေးဖြေး. လိုးပေးပါ ကျ မအရမ်းနာတယ်
အဲဒီကျမှ. ဆရာကလျှော့ပီ လိုးပေးပါတယ် ပက်…..ဘွတ်…..ဘွတ်…….အား
အားးးးးးအားးးးးးးး ကောင်းလိုက်တာ. ဘက်……..ဘွတ်……..ဘွတ်……..
ဖျစ်……….ဖျစ်……..အမလေး …..စောင့်….စောင့်………သီရိပီးတော့မယ် .
အားးးးးးးးးကောငှးလိုကတှာ ဆရှာရယှ. အမလေးးးးးကမှ.
အချက်50လောက် စောင့်လိုးပီ. ကျမအကောင်းဆုံးသို့ရောက်ပီ.
အ ချစ် ဦး မ ဟုတ် ပေ မယ့်